क्यानाडा - ALinks
क्यानाडा मा लेख
यात्रा, जीवित, काम, क्यानाडा मा अध्ययन
कसरी क्यानडामा आप्रवासन गर्ने
अक्टोबर 11, 2021 मैत्री झा क्यानाडा, भिसा
एक लाख भन्दा धेरै नयाँ आप्रवासी क्यानाडा मा आउनेछन्! त्यहाँ क्यानाडा को लागी आप्रवासन र क्यानेडियन स्थायी निवास प्राप्त गर्न को लागी धेरै तरीकाहरु छन्, तर क्यानाडा टीम सम्भव भएसम्म सरल बनाउन को लागी समर्पित छ। कसरी आप्रवास गर्ने
क्यानाडामा रोजगार कसरी पाउने? विदेशीहरूको लागि द्रुत मार्गनिर्देशन
28 सक्छ, 2021 करुणा चन्दना क्यानाडा, जब
एकल पैसा मामला !! (हाम्रो साइट योगदानमा चलाइन्छ, १ पैसाको मामिला पनि, यदि तपाईंलाई लेख मनपर्दछ भने, कृपया योगदान गर्नुहोस्) यदि तपाईं अर्कै देशबाट हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई क्यानडामा काम गर्नको लागि क्यानाडाई वर्क परमिट चाहिन्छ। मा काम गर्न
क्यानाडा मा कसरी घर खोज्ने ..?
डिसेम्बर 20, 2020 एन्टिका कुमारी क्यानाडा, आवास
क्यानडा ल्याण्डमासका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो त्यसैले त्यहाँ कसरी बसोबास गर्ने भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन। तपाईं क्यानाडामा सरे पछि, तपाईंलाई बाँच्नको लागि अस्थायी ठाउँ चाहिन्छ ताकि तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ
नोभेम्बर 16, 2020 एन्टिका कुमारी क्यानाडा, जब
क्यानाडाली रोजगारले विदेशी नागरिकलाई क्यानाडा आउन र काम गर्न उत्सुक हुने धेरै अवसर प्रदान गर्दछ। क्यानाडामा काम र रोजगार धेरै गाह्रो काम छैन; तपाईं चाँडै आफ्नो सपना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानाडाको प्रशस्त अवसरहरूको साथ एक राम्रो अर्थव्यवस्था छ